Muuqaal furaha furaha ah ee ugu weyn ee Windows 10 ka mahadnaqa PowerToys-ka cusub - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Muuqaallada Gawaarida Keyboard-ka ee Windows XP 10 oo wata PowerToys cusub
Muuqaallo furaha furaha Windows 10 keyboard leh PowerToys cusub
Iyada oo la adeegsanayo Microsoft-PowerToys-ka cusub ee cusub, waxaad si fudud u soo bandhigi kartaa galka furaha ee Windows 10 keyboard-ka adoo taabanaya hal fure ah. Ku celceli marka aadan aqoonin iyaga farahaaga!
Haddii Windows 10 si buuxda loo xakameyn karo mouse-ka, inta badan way fududahay in la adeegsado qalabka gaagaaban ee keyboard si dhaqso loogu sameeyo hawlgallada qaarkood. Fursad kuma aha in adeegsadayaasha waayo-aragnimada leh ay jecel yihiin isku-darka furayaashaas, dhaqdhaqaaqyo dhaqaale oo dheeri ah.
Si kastaba ha noqotee, haddii qof kastaa yaqaanno habka gaagaaban ee caadiga ah iyo kuwa caalamiga ah, sida lama huraanka ah Ctrl + C in la nuqulo shey, iskudhaca kale way adagtahay in la xasuusto markii aan badanaa la istcimaalin. Tani waa gaar ahaan kiisaska amarrada Windows-gaarka ah, ee ka faa'ideysanaya taabashada caanka ah Windows keyboard, sida Windows + R kaas oo furaya daaqadda xukunka.
Nasiib wanaag, Microsoft waxay ku dartay xusuus yar oo ka mid ah PowerToys-keeda cusub.
PowerToys: ururinta adeegyo bilaash ah oo lagu hagaajinayo Windows
Waxaa ka muuqday Windows 95, PowerToys waa aruurinta adeegyo yar yar oo bilaash ah oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo isticmaalka Windows. Aad bay caan u ahaayeen waqtigaas, way weynaadeen sanado, laakiin dhowr toddobaad ka hor, Microsoft waxay go'aansatay inay dib ugu soo nooleeyaan qaab gaar ah oo loogu talagalay Windows 10 (arag cusboonaanta) ..
Waqtiga qoraalka, PowerToys waxaa keliya oo laga heli karaa qabyo qoraal ah, aan dhammaystirnayn, si liidata u dhammeystiran, oo dhammaystiran oo Ingiriis ah. Xaqiiqdii, kaliya labo qaybood ayaa la shaqeynayaa xilligan: tan koowaad, oo la yiraahdo FancyZones, waxay u oggolaaneysaa inay dib u habeynta shaashadda ka sameyso dhowr qaybood, oo ay dariishaduhu si otomaatig ah u qiimeynayaan, si loo wanaajiyo goobta shaqada; tan labaad, Hagaha Gaaban, waa hage loogu talagalay gaaga-furayaasha keyboard. Waxaan xiiseyneynaa xaashidan xaqiiqda.
Microsoft waxay qorshaynaysay inay kobciso oo ay horumariso PowerToys-ka cusub iyadoo lagu daro cutubyo badan. Laakiin, in kasta oo si liidata loo dhammeystiro, haddana labada hawlood ee la soo jeediyay ayaa mar hore la isticmaali karaa.
Ku rakib PowerToys cusub ee Windows 10
° Kadib furi faylka la soo degay oo ka kooban rakibka.
Daaqad rakibaadda ayaa furmaya. Wax walbaa waxay ku qoran yihiin Ingiriisiga qeybtan koowaad, laakiin macluumaadka waa la fahmi karaa kuwa aan Ingiriiska ku hadlin. Guji Next si loo bilaabo hawsha.
Shaashadda xigta, aqbal liisanka si aad u adeegsato adigoo calaameynaya sanaadiiqda Waan aqbalayaa shuruudaha ku jira Agrement shatiga ka dib riix Next.
Shaashadda Faylka Goobtauga tag sanduuqyada la hubiyey iyo halka ugu talagalka ah - ama wax ka beddelka ikhtiyaarada la heli karo haddii aad rabto inaad habayn ku sameysid rakibaadda -, ka dib mar labaad riix Next.
Shaashadda xigta, dhagsii Ku rakib oo sug.
Haddii daaqadda Xakamaynta Koontada Adeegsiga waxaa la soo bandhigay si laguugu wargaliyo in codsi uu doonayo inuu isbedel ku sameeyo aaladdaaga - xaaladdan, PowerToys - guji haa inaad aqbasho oo aad mar kale sugto.
Marka rakibida la dhammeeyo, farriinta Dhameystirta Setupka PowerToys ayaa soo muuqda, oo ay ku taal sanaadiiqda Bilaabeyso PowerToys hubiyaa. Guji Finish.
Dariishadda digniinta ayaa furi karta, iyadoo la ogaysiinayo inay ogaysiineyso in codsi doonayo inuu bilaabo. Aqbal adigoo gujinaya haa. PowerToys ayaa ugu dambeyntii si toos ah loo bilaabay.
In kasta oo la bilaabay, PowerToys lama soo bandhigo. Si aad uhesho fahamka, dhagsii fallaadha yar ee hoosta Windows taskbar-ka. Liiska menu mini ee u muuqda, dhagsii sumadda PowerToys adiga oo kaa caawinaya halyeey xumbo hadaadan isla markiiba aqoonsan.
Daaqadda PowerToys kaliya waxay bixisaa labada qaybood ee kor ku xusan. Guji Tilmaanta Gaaban ee safka bidix.
Tilmaanta gaagaaban ee keyboard-ka ayaa leh laba meelood oo keliya: qadarka ay qaadanayso in lagu muujiyo tilmaamaha gudaha milile seconds, iyo saamiga mugga ee dariishadda, oo loo muujiyey boqolley. Maaddaama qiimayaasha caadiga ahi ay sax yihiin, beddel keliya haddii loo baahdo.
Ma jiraan wax gaar ah oo laga sameeyo daaqaddan, oo aad xiri karto booqashadan koowaad kadib.
Adeegso tilmaamaha gaagaaban ee furaha
Tilmaamaha gaagaaban ee Windows keyboard-ka ayaa loo adeegsan karaa waqti kasta kombiyuutar kasta, iyadoo PowerToys-na ay wada shaqeynayso isla waqtiga Windows. Si aad u soo bandhigto, kaliya riix riix dheer oo furaha ah Windows - waa dib u dhaca caanka ah ee lagu tilmaamay tallaabada hore. U fiirsashada, way baaba'aysaa isla marka aad furaha sii deyso!
Tilmaamuhu ma leh shaqo kale oo aan ka ahayn macluumaad: waxna looma adeegsan karo.
Dhinaca bidix wuxuu muujinayaa amarada loo isticmaali karo in lagu maareeyo daaqadaha leh furayaasha fallaarta.
Qeybta saxda ah waa mid lagu xasuusto amarada keena kicinta iskudarka. Feejignaanta kaliya furayaasha sare ayaa la muujiyaa: waa in had iyo jeer loo istcimaalaa furaha Windows. tusaale ahaan, Windows + S si loo bilaabo raadinta, Windows + D si loo muujiyo ama loo qariyo desktop-ka, Windows + E si loo furo Faylka Explorer, Windows + M si loo yareeyo dhammaan dariishadaha, iwm.
Ugu dambeyntiina, safka furayaasha lambarrada ah ee hoosta ku yaal waxay muujinayaan barnaamijyo software ah oo lagu meeleeyey tiirarka hawsha si toos ah loogu bilaabi karo furaha lambarka (tusaale ahaan, Windows + 3 si loo bilaabo softiweerka saddexaad ee bidixda).
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.commentcamarche.net/faq/52342-afficher-les-principaux-raccourcis-clavier-de-windows-10-grace-aux-nouveaux-powertoys
Google Stadia: tijaabooyin bilaash ah ayaa la siin doonaa macaamiisha iyo kuwa aan iska diiwaan gelin
Apple waxay cusboonaysiisaa safka 'ipad' iyadoo la soo bandhigayo nooc cusub oo ah 'inch' 10,2 inch